“Rine nhamo guta rekudeura ropa!” (1-19)
Zvakaita kuti Ninivhi itongwe (1-7)
Ninivhi ichawa sezvakaita No-amoni (8-12)
Ninivhi ichatowa chete (13-19)
3 Rine nhamo guta rekudeura ropa! Guta rizere neunyengeri neugororo. Rinogara richingopamba! 2 Tyava iri kurira uye mavhiri ari kutinhira,Bhiza riri kumhanya kwazvo uye ngoro iri kuuruka. 3 Kune akatasva bhiza, kune bakatwa rinopenya nepfumo rinovaima,Kune vazhinji vakaurayiwa uye kune mirwi yezvitunha;Zvitunha zvacho hazviperi. Vanoramba vachidonhedzwa nezvitunha zvacho. 4 Izvi zviri kuitika nemhaka yeupfambi hwakanyanya hwakaitwa nepfambi,Hwakaitwa nemukadzi uya ane runako uye anokwezva, iye tenzikadzi wevaroyi,Uya anoteya marudzi neupfambi hwake uye anoteya mhuri neuroyi hwake. 5 “Inzwa! Ndiri kukurwisa,”* ndizvo zvinotaurwa naJehovha wemauto,+“Ndichafugura nguo yako ndoiisa kumeso kwako;Ndichaita kuti marudzi akuone usina kupfeka,Uye kuti madzimambo aone kunyadziswa kwako. 6 Ndichakanda zvinhu zvinosemesa pauriNdoita kuti uzvidzwe;Ndichakuita chiseko.+ 7 Wese anokuona achakutiza+ oti,‘Ninivhi yaparadzwa! Ndiani achainzwira tsitsi?’ Ndichawana kupi vanokunyaradza? 8 Iwe unopfuura No-amoni*+ here, iyo yakanga iri pedyo nemigero yaNire?+ Yakanga yakapoteredzwa nemvura;Gungwa ndiro raiva pfuma yayo nerusvingo rwayo. 9 KuItiopiya nekuIjipiti ndiko kwaibva simba rayo risingaperi. Yaibatsirwa* nePuti+ nevaRibhiya.+ 10 Asi yakangotapwa zvakadaro;Yakatorwa ikaendwa nayo.+ Vana vayo vakadimburwa-dimburwa pamakona ese emigwagwa. Vanokanda mijenya kuti vagovane varume vayo vanokudzwa,Uye varume vane mukurumbira pakati payo vasungwa nezvisungo zvemumakumbo. 11 Iwewo uchadhakwa;+Uchanohwanda. Uchatizira kumuvengi. 12 Nzvimbo dzako dzese dzekuhwanda dzakafanana nemionde ine michero inotanga kuibva;Kana ikazunzwa, maonde acho anowira mumuromo mevanhu vanoatsenga-tsenga. 13 Inzwa! Mauto ako akaita sevakadzi. Magedhi enyika yako achange akavhurika kuti vavengi vako vapinde. Moto uchaparadza mazariro* emagedhi ako. 14 Chera mvura yekuzoshandisa pauchakombwa!+ Simbisa nzvimbo dzako dzekuhwanda. Pinda mumatope ukanye dhaka;Tora foroma yezvidhinha. 15 Asi moto uchangokuroromesa imomo. Bakatwa richakutema-tema.+ Richakuparadza sezvinoitwa nemhashu diki.+ Ivai vazhinji semhashu diki! Chokwadi wandai semhashu! 16 Wakaita kuti vanhu vako vanotengesa vawande kupfuura nyeredzi dzekudenga. Mhashu diki inovhunura yobhururuka ichienda. 17 Varindi vako vakaita semhashu,Uye vakuru vakuru vari pakati pako vakaita semhashu dzinobhururuka dzakawanda. Musi wakunenge kuchitonhora, dzinomhara mumatanga akavakwa nematombo,Asi zuva parinobuda, dzinobhururuka dzoenda;Uye hapana anoziva kwadzinenge dziri. 18 Vafudzi vako vari kutsimwaira, iwe mambo weAsiriya;Makurukota ako anoramba ari mudzimba dzawo. Vanhu vako vangova kwese kwese mumakomo,Uye hapana ari kuvaunganidza.+ 19 Dambudziko rako hariperi. Ronda rako haricharapiki. Vese vanenge vanzwa zvaitika kwauri vacharova maoko;+Nekuti hapana asina kutambura neutsinye hwako husingaperi.”+
^ ChiHeb., “Waibatsirwa.”